MUUQAAL: Madaxweyne Gaas oo Yiri “P/Land ma oydo ee waa Aarsataa” (KHUDBAD XASAASI AH & 13 QODOB) - Hablaha Media Network
MUUQAAL: Madaxweyne Gaas oo Yiri “P/Land ma oydo ee waa Aarsataa” (KHUDBAD XASAASI AH & 13 QODOB)
HMN:- Madaxweynaha Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee P/Land C/Wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in duulaankii lagu soo qaaday deegaanada maamulkiisa uu ahaa mid qorsheysan.
Isagoo hadal dheer ka jeedinayay furitaanka kalfadhigii 39-aad ee Barlamaanka P/Land ayuu C/Wali Gaas ku hanjabay iney soo gaba gabeyn doonaan Shabaabka ku sugan Buuraha Galgala halkaas oo dhawaan ciidamo badan looga laayay.
“P/Land waxaa lagu soo qaaday duulaamo wajiyo badan leh oo ugu dambeeyay dagaalkii Saldhiga Af Urur, si wax loogu yeelo amaanka P/Land, waxaana ay dowladu ku dhawaaqday 9-kii June 2017 dagaal balaaran oo P/Land looga sifeynayo burcad diimeedka Shabaab, waxaana ay ciidamadeena udiyaarsan yihiin iney udhaqaaqaan goob kasta oo ay ku dhuumaaleysanayaan AlShabaab”.
C/Wali Gaas oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “P/Land ma oydo ee waa Aarsataa”
HOOS KA DAAWO KHUDBADDA GAAS
Arimihii ugu waa weynaa ee uu ka hadlay Madaxweynaha P/Land waxaa kamid ah:-
1- Weerarkii Alshabab tuulada Af-urur iyo Abaalmarinta Ciidamo Puntland.
2- Hanaanka isku dhafka ciidamo qaran oo ka imaanaya maamulada dalka.
3- Maaliyadda iyo Nidaamka Maareynta Dhaqaalaha Puntland .
4- Gurmadkii Abaaraha iyo Taakuleynta Reer Miyiga Puntland.
5- Beeraha iyo Ilaalinta Deegaanka.
6- Kor u qaadida Cadaaladda iyo Dhaqan-celinta Maxaabiista.
7- Garoomada Puntland iyo Dhismaha Airport-ka Garowe iyo Gaalkacyo.
8- Shatiyadda Ganacsiga iyo Heshiisyada Is-afgaradka.
9- Heshiisyada Puntland la gashay Shirkado Shisheeye
10 – Arrimaha Ciyaaraha iyo Dhiirigalinta Dhalinyarada.
11- Arrimaha Shaqaalaha iyo Tiro-koobka Shaqaalaha Puntland.
12- Arrimaha Qorsheynta Xiriirka Caalamiga ee Puntland.
13- Arrimaha Haweenka iyo Taaba-galinta Siyaasada Jinsiga iyo